Donald Trump oo ka tanaasulaya booqashadiisii 1aad ee Britain – Kasmo Newspaper
Donald Trump oo ka tanaasulaya booqashadiisii 1aad ee Britain
Updated - June 11, 2017 2:30 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump ayaa qorshaynaya inuu ka tanaasulo booqashadii uu ku imaan lahaa Britain, tan iyo markii la doortay 2016kii, sidaasna wuxuu ku sheegay taleefan uu kula soo hadlay R/Wasaare Theresa May.
Wargayska Guardian ayaa soo xiganaya sarkaal ka tirsan Xafiiska R/Wasaaraha goob-joogna ka ahaa xilligii ay 2da hoggaamiye wada hadlayeen oo ku beegnayd toddobaadkii la soo dhaafay.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu booqashadiisa dib u dhigayo ilaa inta ay hoos uga dhacayaan cabashooyinka looga soo horjeedo. Wargaysku waxaa kale oo uu ka hadlay in tillaabada ka-noqosahada booqashada ay ku noqotay kadis xitaa Theresa May qudheeda.
Sarkaal u hadlay Downing Street ayaa beeniyay kana gaabsaday nuxurka sheekadii waxa uu ugu yeeray “taleefannada gaarka ah” ee dhex maray May iyo Trump, wuxuuna xusay in Boqoraddu casumaad u fidisay Madaxeweynaha, barnaamijkaasna wax laga beddelay ayan jirin.
Laakiin go’aanka Trump waxaa soo dhoweeyay Hoggaamiyaha Labourka, Jeremy Corbyn, iyada oo xiriirka London iyo Washington sii dabcay, maalin ka dib weerarkii London Bridge, kaas oo Madaxweyne Trump mid ka mid ah Twitterkiisa falan uu ku sheegay in Duqa London saddiq Khan yahay nin an wax ka qaban karin nabadgalyada Caasimadda.
Farriintaas oo durba safiirka Maraykanka u fadhiya London iska fogeeyay iyo R/Wasaaraha qudheeda oo ku tilmaantay Saddiq Khan “nin shaqo fiican u haya dalkiisa, wixii kale oo laga sheegana khalad iyo gaf yihiin”.
Dad kor u dhaafay 1/5 malyuun oo qof (oo record ah), ayaa codsi wada-jir loo saxiixay (Petition), loogana soo horjeedo in uu Trump soo galo Britain, u gudbiyay Barlamaanka, bilowgii sannadkaan 2017ka, kaas oo walaac badan iyo waji-gabax Dibolomaasiyadeed ku hayay xukuumadda.
Codsiga waxaa la bilaabay ka hor marti-qaadkii rasmiga ahaa ee Ra’iisal Wasaare Theresa May u fidisay Madaxweynaha, laakiin wuxuu sii xoogaystay ka dib markii Donald Trump soo saaray 27kii Jenaayo, amarkii lagu joojinayay soo-galootiga.
Sacuudiga oo noqday dalka 2aad Dunida ee soo dhoofsada hubka (Daraasad cusub)